Banyere Tenorshare iPhone Data Recovery
Tenorshare iPhone Data Recovery na-kewaa ka ọtụtụ obere software dị ka Tenorshare Data Recovery iPhone 3GS, iPhone 4 Data Recovery Tenorshare, Tenorshare iPhone 4S Data Recovery na Tenorshare iPhone 5 / 5S / 5C Data Recovery. Nke ahụ bụ na-ekwu, ị pụrụ nanị na-otu nke ha mgbe ị na-mere a zụọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji ya na-ike iṅomi dị iche iche iPhones, i kwesịrị ịzụta ya dịkarịa ala 4 ugboro. Nke ahụ bụ a nnukwu ego.
Banyere Tenorshare iPhone Data Recovery ọzọ
The Tenorshare iPhone Data Recovery ọzọ - Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) ga-eji na niile iPhones. E wezụga, i nwere ike na-eji ya na-iṅomi gị iPad na iPod aka, mgbe i nwere mkpa. Niile na-ike n'ime otu usoro ihe omume. Ị na mkpa ịzụta otu ugboro, ma ị nwere ike iji ya maka gị niile iPhone, iPad na iPod aka. Ọzọ, ka ego dị iche na na zuru ezu.
Devices akwado N'ihi na ihe niile iPad, iPhone na iPod aka
(akwado site otu usoro ihe omume) N'ihi na iPhone 3GS, ma ọ bụ iPhone 4, ma ọ bụ iPhone 4S, ma ọ bụ iPhone 5 / 5S / 5C
(akwado site anọ iche iche omume)
Naputa site na iTunes ndabere
Ruo 14 ẹdude faịlụ na ụdị:
kọntaktị, ozi, Kpọọ akụkọ ihe mere, Kalinda, Edeturu, Ncheta, Safari ibe edokọbara, Igwefoto Roll, Voice memos, Message Mgbakwụnye, WhatsApp, Photo Stream, iMessages, oziolu
Ruo 11 ẹdude faịlụ na ụdị:
kọntaktị, ozi, Kpọọ akụkọ ihe mere, Kalinda, Edeturu, Ncheta, Safari ibe edokọbara, Igwefoto Roll, Voice Memos, Message Mgbakwụnye, WhatsApp
Ruo 14 ehichapụ faịlụ na ụdị: The otu dị ka n'elu Adịghị akwado
Kpọmkwem ike iṅomi ihe iPhone Ruo 15 faịlụ na ụdị (Photo Library gụnyere) Ruo 11 ụdị
Kpọmkwem Doppler iPad na iPod aka Ruo 15 faịlụ na ụdị (Photo Library gụnyere) Ruo 11 ụdị
Download a Tenorshare iPhone Data Recovery ọzọ na nwere a na-agbalị ugbu a!
Olee otú iji a Tenorshare iPhone Data Recovery dochie
Nkebi nke 1: Kpọmkwem naghachi data site na iPhone (iPad / iPod Touch)
Part 2: Wepụ iTunes ndabere naghachi iPhone data (iPad / iPod aka)
N'agbanyeghị na ị na-eji Windows version ma ọ bụ Mac mbipute a iPhone data mgbake nnọchi nke Tenorshare, ị pụrụ ịgbaso nzọụkwụ n'okpuru na-eme ka yiri arụmọrụ. Dum usoro nwere ike mere ole na ole clicks. Ọzọ, ka na-agbalị na Mac version ọnụ.
Nkebi nke 1: Kpọmkwem naghachi data site na iPhone
Nzọụkwụ 1. Gbaa ndị software na jikọọ na gị iPhone na kọmputa
Tupu ị na-eme ihe ọ bụla ọzọ, na-agba ọsọ Tenorshare iPhone data mgbake ọzọ na jikọọ gị iPhone na kọmputa. Mgbe gị iPhone achọpụtara site usoro ihe omume, ị ga-ahụ dị iche iche windows dị ka ihe nlereanya nke gị iPhone.
N'ihi na iPhone 4S / 5 / 5S / 5C, usoro ihe omume si window ga-adị ka ndị a:
N'ihi na iPhone 4 / 3GS, na windo ga-adị ka nke a:
Nzọụkwụ 2. iṅomi gị iPhone ịchọta data na ya
Ọ bụrụ na ị na-eji ihe iPhone 4S / 5 / 5S / 5C, ị nwere ike ozugbo pịa na Malite iṅomi bọtịnụ na isi window na-amalite ịgụ isiokwu gị iPhone maka data na ya.
Ọ bụrụ na ị na-eji ihe iPhone 4 ma ọ bụ ihe iPhone 3GS, mkpa ka i soro nkọwa n'okpuru iji nweta n'ime scanning mode na ike iṅomi gị iPhone:
1. Jide gị iPhone 4 / 3GS na pịa Malite bọtịnụ na usoro si window na-amalite.
2. Ozugbo ị malitere, pịa Home na Ike buttons na gị iPhone n'otu oge maka kpọmkwem 10 sekọnd.
3. Mgbe 10 sekọnd, hapụ Ike button, ma na-na ịpị Home button ọzọ 10 sekọnd, ruo mgbe ị ga-esi n'ime scanning mode. Mgbe ahụ usoro ihe omume ga-akpaghị aka iṅomi gị iPhone.
Nzọụkwụ 3. Preview na-agbake data si iPhone
Mgbe usoro nke ịgụ isiokwu okokụre, ị ga-esi niile ehichapụ na ẹdude data na gị iPhone na a Doppler N'ihi. Niile data na-ọma haziri. Ịnwere ike ihuchalu ma elele ihe ọ bụla na onye ọ bụla udi otu otu. Akara onye ị chọrọ na-azọpụta ya na kọmputa gị site na iji Naghachi bọtịnụ.
Ugbu a, niile nzọụkwụ bụ ebe a. Download ikpe mbipute na nwere agbalị maka free site onwe gị!
Nkebi nke 2: Wepụ iTunes ndabere naghachi data gị iPhone
Ọzọ, ka ego otú naghachi ehichapụ data si iTunes ndabere na nke a Tenorshare iPhone Data Recovery ọzọ - Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery). Ọzọkwa, ka ego nzọụkwụ na Mac version ọnụ.
Nzọụkwụ 1. Họrọ na wepụ iPhone ndabere
Mgbe-agba ọsọ a iPhone data mgbake software, ịgbanwee gaa na mgbake mode n'elu nke ya window: naputa site na iTunes ndabere File. Mgbe ahụ, ọ ga-akpaghị aka ịhụ niile iTunes ndabere faịlụ ẹdude na gị Mac. Họrọ onye na maka gị iPhone na pịa na Malite iṅomi na-amalite adịrị ya.
Nzọụkwụ 2. Preview na-agbake gị iPhone data si ndabere
Usoro ihe omume ga n'ịwa a Doppler N'ihi gị mgbe Doppler. E ị ike ihuchalu niile ọdịnaya na selectively nne Mmetụta ihe ọ bụla ihe mgbake. The ehichapụ data gosiri na oroma. Ọ bụrụ na ị chọrọ ikewapụ ya, ị nwere ike gbanye nyo: Naanị egosipụta ehichapụ ihe, nke a na-gosiri na n'etiti-top nke window.
Download ikpe mbipute a Tenorshare iPhone Data Recovery ọzọ n'okpuru maka free inwe a na-agbalị ugbu a!
Tenorshare iTunes Data Recovery Alternative: Naghachi iPhone, iPad na iPod aka
Olee otú iji Hichapụ Kuki on iPhone
Best iPhone Photo Manager jikwaa iPhone Photos
Mee iPhone Video ngosi mmịfe na Photos si iPhone
> Resource> iPhone> The Best Tenorshare iPhone Data Recovery Alternative